Kiisaska Corona oo ku soo kordhay Yurub, 6 toddobaad ka dib markii ay hoos u dhaceen Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaKiisaska Corona oo ku soo kordhay Yurub, 6 toddobaad ka dib markii ay hoos u dhaceen
Maamulka Gobolka ee Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa ku dhawaaqay in tirada infekshannada Coronavirus ay mar kale ku soo kordhayaan Yurub, ka dib lix toddobaad oo hoos u dhac ah.
“Waxaan ogaaneynaa dib u soo noqoshada Corona ee Bartamaha iyo Bariga Yurub, halkaasoo tirada kiisaska ay horay u jireen ,” ayuu yiri agaasimaha gobolka ee ururkan ee Yurub, Hans Kluge.
Toddobaadkii hore, tirada kiisaska Covid-19 ee Yurub ayaa kordhay 9%, in ka badan hal milyan, sida ay sheegtay laanta Yurub ee Ururka Caafimaadka, oo ay ku jiraan in ka badan konton dal oo ku yaal Yurub iyo xitaa Bartamaha Aasiya.
Kluge wuxuu carabka ku adkeeyay in “arintani ay soo afjarayso hoos udhac rajada leh ee tirada infekshanada cusub ee socday mudo lix todobaad ah, iyadoo in kabadan kala bar (wadamada) gobolkeena ay diiwaan galinayaan tirada sii kordheysa ee infekshanada cusub.”
Oo wuxuu tixgeliyey in reer Yurub ay tahay inay “ku soo noqdaan aasaaska (mabaadi’da)” si loola dagaallamo fayraska iyo noocyadiisa is beddelay, iyadoo la adeegsanayo aaladaha ku habboon iyo dardargelinta xawaaraha tallaalka.
“Waxaan u baahanahay inaan balaarino noocyada talaalka ee la isticmaalo,” ayuu yiri.
Marka loo eego xogta rasmiga ah ee ay soo uruurisay Wakaaladda France-Presse, 2.6% dadka ku nool Midowga Yurub waxay heleen laba qiyaasood oo mid ka mid ah tallaallada COVID-19 iyo 5.4% ugu yaraan hal qiyaas.